WSU GPU, kuitiswa kwekupa mukana wekushandisa mifananidzo yeLinux muWSL | Linux Vakapindwa muropa
WSU GPU, kumisikidza kupa mukana wekushandisa mifananidzo yeLinux muWSL
Darkcrizt | | Resources, Windows
Vhiki rapfuura, iyo Vagadziri veMicrosoft vazivisa zvinoverengeka zvakakosha zvinowedzera ku iyo sisitimu WSL (Windows Subsystem yeLinux), iyo inogonesa Linux zvishandiso kumhanya paWindows. Sezvo Kutanga neWindows 10 May Gadziridza, iko kwekutanga kuiswa kweLinux nharaunda ichashandisa iyo WSL2 dura nekukasira.
Iyo WSL2 nharaunda inomhanya pane diski mufananidzo (HDV) paradzaniswa neiyo ext4 fileystem uye iyo chaiyo network adapta. Iyo Linux kernel muWSL2 Izvo hazvizosanganisirwe muWindows yekumisikidza mufananidzo, asi Windows ichaita zvine simba kurodha iyo uye ichaichengeta iri muchimiro chazvino, chakafanana nemadhivhuru emagetsi akaiswa nekuvandudzwa. Kuisa uye kugadzirisa iyo kernel, iyo yakajairwa Windows Gadziriso mashandisiro anoshandiswa.
Iyo yakakumbirwa nucleus ye WSL2 yakavakirwa pane iyo Linux 4.19 kernel kuburitswa, inomhanya munzvimbo yeWindows uchishandisa muchina chaiwo watove kushandiswa muAzure.
WSL2-yakatarwa zvigamba zvinoshandiswa mukernel inosanganisira optimizations yekudzikisa kernel kutanga nguva, kudzora ndangariro kushandiswa, kudzosera Windows mundangariro dzakasunungurwa neLinux maitiro, uye kusiya yakaderera seti yeanodiwa madhiraivha uye masystems mune kernel.
Izvozvi zvave kugona kumhanyisa graphical application muWSL
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro apa, imwe yezvinhu zvitsva izvo zvinomira kunze ndeye Pakutanga rutsigiro rweLinux kunyorera ne "WSU GPU" graphical interface.
Rutsigiro suye zvishandiso nekuita kuti GPU isvike uye nekupa madhiraivha kuburikidza neiyo yakajairwa graphical subsystems yeLinux kugoverwa kunogona kushanda, kusanganisira izvo zvakavakirwa Wayland. Linux neWindows graphical application zvinogona kumhanya padivi padivi paWindows desktop.
Yakavhurika dxgkrnl mutyairi akagadzirirwa iyo Linux kernel, ichipa iyo / dev / dxg chishandiso nemasevhisi ayo anoteedzera iwo Windows anoratidza mutyairi modhi (WDDM) D3DKMT yeWindows kernel. Mutungamiriri anogadzira chinongedzo kuGPU chaiyo achishandisa iyo VM bhazi. Zvishandiso zveLinux zvine mwero wakaenzana weGPU yekuwana seyakaberekerwa Windows maapplication pasina kugovera zviwanikwa pakati peWindows neLinux.
Uye zvakare, raibhurarilibd3d12.so inopihwa Linux, iyo inopa iyo Direct3D 12 yakazara graphical API.
Raibhurari3d12.so raibhurari yakavakwa kubva kune imwecheteyo kodhi seyakajairwa Windows kuitisa yeDirect3D 12 uye yakafanana zvachose mukushanda kune iyo d3d12.dll raibhurari.
Iniwo ndinoziva inopa yakareruka vhezheni yeiyo DXGI API (DirectX Graphics Infrastructure) muchimiro cheDxCore raibhurari (libdxcore.so). Iyo libd3d12.so uye libdxcore.so maraibhurari ndeekutengesa uye anounzwa chete mune mabhainari anovaka (akaiswa paWSL se / usr / lib / wsl / lib), inoenderana neUbuntu, Debian, Fedora, Centos, SUSE, uye kumwe kugoverwa kweGlibc .
Tsigiro yeOpenGL muMesa inopihwa kuburikidza nedenga iyo inoshandura iyo DirectX 12 API inoshevedza. Iyo nzira yekushandisa iyo Vulkan API ichiri muchikamu chekuronga.
Muchikamu chekutanga, munzvimbo dzeWSL, CUDA uye DirectML inotsigirwa, kushanda paD3D12 API (semuenzaniso, munzvimbo yeLinux, unogona kumhanya TensorFlow ne backend ye DirectML). Rutsigiro rweOverCL runogoneka kuburikidza neyakagadzika inoita mepu yekufona muDirectX 12 API.
Microsoft iri kuvandudza maneja wayo wemubatanidzwa uchishandisa iyo Wayland protocol uye zvichibva paWeston kodhi base. Mutungamiriri anoumbwa anoshandisa RDP-RAIL (Yemunharaunda Yakabatanidzwa RDP Remote Chikumbiro) kuronga kuburitsa kweLinux application interface kune main Windows desktop. RDP-RAIL inosiyana neiyo RDP backend yaimbowanikwa kubva kuWeston mukuti musanganiswa wemubatanidzwa haape desktop yacho pachayo, asi panzvimbo pezvo inodzosera nzvimbo dzega dzega (wl_surface) kuburikidza neRDP RAIL chiteshi kuratidza padhesiki hombe reWindows.
Uye zvakare, kuiswa kweWSL neyakareruka wsl.exe -install rairo ichakurumidza kutsigirwa.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » WSU GPU, kumisikidza kupa mukana wekushandisa mifananidzo yeLinux muWSL
Iwe uri nhanho imwe kubva pakushandura zita rewebhusaiti kune wsladictos.com
WSL, senge iyo kana kwete, chikamu chenyika yeLinux uye isu tinofanirwa kuifukidza.
WSL haisi yekushandisa yakagadzirirwa mushandisi mu "General", inofanirwa kunzwisiswa kuti yakagadzirirwa vashanduri, maneja manejimendi, pakati pevamwe uye kana yasvika nguva yekushanda, iwe unofanirwa kuisa parutivi izvo zvaunofarira uye kutevedzera gwara iwe Iye munhu kana kambani yaunoshandira yaunomiririra, kana ichikubvumidza kuti ushandire pakugadzikana kwako, zvakanaka kwazvo, asi kana zviri izvo zvinokuisira iwe hapana imwe nzira.
Raspberry Pi 4 inokwira kusvika ku8GB ye RAM, asi inochengeta zvimwe zvese zvirevo
OpenSSH 8.3 iri pano uye idzi ndidzo nhau dzayo